Friction Tester Factory - China Friction Tester Manufacturers, Suppliers
DRK835B Fabric Surface Friction Coefficient Tester (B nzira)
DRK835B jira pamusoro pekukweshera coefficient tester (B nzira) yakakodzera kuyedza kuita kwefriction yejira rejira.
DRK835A Fabric Surface Friction Coefficient Tester (A nzira)
DRK835A jira pamusoro pekukwenya coefficient tester (Nzira A) yakakodzera kuyedza kuita kwefriction yejira remachira.
DRK312 Fabric Friction Electrostatic Tester
Muchina uyu wakagadzirwa uye unogadzirwa zvinoenderana neZBW04009-89 "Nzira yekuyera iyo Frictional Voltage yeMicheka".Pasi pemamiriro emurabhoritari, inoshandiswa kuongorora maitiro emagetsi emachira kana shinda uye zvimwe zvinhu zvinochajiswa nenzira yekukwesha.
DRK312B Fabric Friction Charging Tester (Faraday chubhu)
Pasi petembiricha: (20±2)°C;hunyoro hwehukama: 30% ± 3%, sampuli inokwizwa neyakatsanangurwa friction material, uye sample inobhadhariswa muFaraday cylinder kuyera kubhadharisa kwesample.Zvadaro shandura iyo kuhuwandu hwekuchaja pane imwe unit unit.
DRK128C Martindale Abrasion Tester
DRK128C Martindale Abrasion Tester inoshandiswa kuyera abrasion kuramba kwemachira akarukwa uye akarukwa, uye anogona zvakare kuiswa kumachira asiri akarukwa.Haikodzeri machira emurwi akareba.Inogona kushandiswa kuona kushanda kwepilling yemachira emvere pasi pekumanikidzwa kudiki.